Valifatin’ny Olona Iray Manohitra Ny Fampielezankevitra Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2015 3:12 GMT
“Noodleremover” (Mpanongotra paty) amin'ny rakitry boob. Sarinà fahitalavitra Sovietika avy tamin'nyFlickr. CC 2.0. Nalefan'i Kevin Rothrock.
Niasa tamin'ny media an'ny fanjakana Rosiana izy, nitantana ny tetikasa inoSMI.ru izay RIA Novosti teo aloha efa maty, izay mamadika ny media amin'ny teny vahiny ho amin'ny teny Rosiana. Ankehitriny, mamaly faty an'ireo olona lazainy fa namotika ny mediam-panjakàna an'ny firenena i Alexey Kovalev. Ny vohikala vaovao antsoina hoe Noodleremover.news no fitaovam-piadiany, kilalaon-teny amin'ny fehezanteny Rosiana hoe “paty eo an-tsofinareo,” izay midika tsotra hoe “tantara sarotra inoana.”
Mikendry ireo tatitra diso sy mamitaka ao amin'ireo media Rosiana, indrindra ireo tantara momba ireo hevi-bahoaka sy an'ny manampahaizana any Andrefana momba an'i Rosia, ilay tetikasa (izay lazain'i Kovalev fa niantomboka tamin'ireo lahatsoratra ao amin'ny Facebook ary nitombo tamin'ny Medium.com, nialoha ny nividianany ny sehatra ho azy manokana).
Ireo lahatsoratra vao haingana an'i Kovalev izao nilaza ny fomba namoronan'ny tambajotranà fahitalavitry ny Minisiteran'ny Fiarovana Rosiana tafatafa tsy marina niaraka tamin'ny Praiminisitra Okraniana, izay nolazaina fa niampangan'i Arseniy Yatsenyuk ny Praiminisitra teo aloha Yulia Tymoshenko ho nanao filàm-baniny ara-nofo. Nisy lahatsoratra hafa nijery ny fomba nanampian'ireo Amerikana evanjelista tamin'ny fanamboarana ny famoretan'i Rosia ny zon'ireo sarimbavy, sady midera an'i Vladimir Putin ihany. “Mba ho afaka mahazo tsenam-barotra vaovao sy mpanohana,” manoratra izao i Kovalev, “mila manindrahindra ny mpanjaka eo an-toerana [ireo evanjelista tsy tia ny olona mitia ny mitovy fananahana aminy], izay noana ireo vahoakany, sady milazalaza ao amin'ny fahitalavitra mikasika ny lanjan'ny fivavahana sy ny taham-panekena 90 isan-jato.”
Nanome ny tefaka goavana indrindra avy aminy indray ny Noodleremover tamin'ilay lahatsoratra navoaka ny 18 Septambra, mitondra ny lohateny hoe “Rosia Ankehitriny, Adin'ny Torohay, ary Fijery an-Davitrisany: Ny Fomba Nahazoan'izy ireo Ny Antontan'isany,” izay namerenan'i Kovalev nijery ny torohay nalefan'ny The Daily Beast tamin'ny teny Anglisy, momba ny fomba feno fanahy iniana ataon'ny tambazotra RT an'ny fanjakana Rosiana handikàna vilana ny angon-drakitra momba ny habetsaky ny mpijery azy mba hiheboheboana amin'ny fahafahany misintona ny sain'ny olona. Nilaza tao amin'ny RuNet Echo i Kovavlev fa mahasintona mpamaky maherin'ny 60.000 ilay singa. Izay fotoana izay, hoy izy, no nanapahany hevitra hoe “tena zavatra tokony atao tokoa” ilay vohikalany vaovao.
Na milaza aza izy fa “mendrika ny ho atao” ny vohikalany, mbola mihazohazo ny hamaritra ny Noodleremover ho toy ny ezaka hitondra fampianarana mamaky ny media ho an'ireo Rosiana i Kovalev. “Tsy afaka na dia mamadika ny ‘fampianarana mamaky ny media’ ho amin'ny fiteny Rosiana akory ianao,” hoy izy tao amin'ny RuNet Echo. “‘Media gramotnost’”? tsy misy dikany izany amin'ny mpiteny Rosiana. Fa mieritreritra aho hoe tena zava-dehibe ny mampianatra ny olona ny fomba handraisana ireo vaovao. Samy manana fandaharam-potoana ireo mpamoaka vaovao.”
Tsy manafina ny fandaharam-potoanany i Kovalev. “Tsy asiako vidiny i [Margarita] Simonyan [sefon'ny mpamoaka vaovao an'ny RT sy Rossiya Segodnya] noho ny nataony tamin'ny RIA,” hoy izy. “Sady eo amin'ny vohikala ihany koa ny anarako, ary ankehitriny feno karazan-javatra maloto maro io. Ary tena mahamenatra ny mahita ny anarako eo ankilan'ny tantara tsy misy dikany momba ny maha-tsy mahay mandihy an'i Obama. Raha nipoitra tamin'ny RIA taona maromaro lasa izay ny karazana tantara sahala amin'io, voaroaka ny toniandahatsoratra.”
Alexey Kovalev (eo afovoany). Sary: Facebook.
Mety nanomboka sahala amin'ny hetsika valifaty ny Noodleremover, fa mitombo lasa zavatra lehibebe kokoa. Efa manana mpanaraka maherin'ny an'arivony ao amin'ny Twitter ilay tetikasa, taorian'ny nivoahany ny volana Oktobra 2015 ary nalefa bitsika in-19. Nilaza i Kovalev fa tena mampahery azy amin'ny asany tokoa ny fihetsiky ny vahoaka manoloana io:
Maharay ireo valin-kafatra rehetra aho ary milaza amiko ny olona hoe “Tena tsara kosa ilay izy kooo. Tsy mbola nisy olona nanao zavatra tahàka izao.” Ary tsapako fa tena marina izany. Tsy mbola nisy olona tao Rosia nieritreritra ny fomba fandraisantsika ampahanà vaovao iray. Nahoana no mivoaka ny tantara iray miavaka? Nahoana io no alefa? Fandaharam-potoana inona no ananan'ny media milaza io? Karazana fandaharam-potoana toy inona no mety ananan'ny loharano iray tsy mitonona anarana? Avy aiza zao io? Nahoana io no mbola ao?
Fony nipoaka ny vaovao voalohany momba ireo andiana Rosiana any Syria, nanomboka voamariko ireny vohikala kely hafahafa ireny, miaraka amin'ny mpamaky manakaiky ny aotra (vohikala izay manana mpitsidika mety ho 100 isan'andro), fa notanisain'ny Spoutnik na RT ihany izy ireo nony farany, ary naverina notanisaina indray izy ireo tany an-kafa tany, ary lasa nanomboka ho karazana làlana mankany amin'ny faneken'ny olona azy ireo io. Mandefa zavatra aminà vohikala tsy mazavazava fotsiny ianao, ary averimberina imbetsaka io ka lasa adinon'ny olona rehetra hoe inona tokoa moa ilay vaovao tamin'ny voalohany. Dia mbola eo fotsiny izy. Ary nisy ity tambajotranà vohikala kely hafahafa tsy mazava ity izay manipy zavatra eny ho eny fotsiny. Avy eo nanomboka notanisaina ary naverimberina in-jato ilay izy.
Tsy ny rehetra no mieritreritra hoe “tena tsara” ny tetikasan'i Kovalev, mazava ho azy. Tsy haheno ny momba ny Noodleremover ny ankamaroan'ireo Rosiana, fa ara-drariny ny hieritreretana hoe mety hanakaikikaiky azy io ry zareo, raha jerena ireo fitondrantena ao Rosia momba ny fampahalalambaovao. Araka ny fanadihadiana nasiônaly , ny volana lasa teo, nataon'ny masoivoho tsy miankina amin'ny fanjakana mpitsapa hevitra, Levada Center, tsy hoe maro fotsiny ireo Rosiana mahatoky ny fahitalavitra noho ny Aterineto (59 isan-jato raha 37 isan-jato ny iray), fa tena mitombo mihitsy ihany koa ny finoana ny lvaovao alefa amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ary amin'ireo gazety an-tsoratra. Tany amin'ny telo taona lasa tany, tena vitsy ireo Rosiana nino hoe tsy mandsio fanantenana azy ireo media ireo. Ny volana Septambra 2012, ohatra, 55 isan-jaton'ny firenena nilaza fa nieritreritra hoe tena manao fanahy iniana mitatitra ny antsasaky ny tena marina amin'ny vaovao ny media. Telo taona taty aoriana, nidiny ho 42 isan-jato io salan'isa io.
Nilaza tamin'ny RuNet Echo i Kovaleva hoe mety famaliana ataon'ny Rosiana ny fitobahana vaovao be loatra manerana ny tany io, ary fitodihany amin'ireo mpamoaka vaovao izay manome zavatra tsara indrindra. Ilain-dry zareo ny mitoetra ho milamin-tsaina tsara mba hahafahan'ny olona manaiky ireo hevitra sy vaovao izay matetika no tsy misy dikany :
Rehefa miatrika loharanom-baovao betsaka loatra, tonga dia mifikitra ho azy amin'ny loharano iray ihany ny olona (na diso io na marina) satria hoe “io ny anay”. Misy karazana lentanà fieritreretana in-droa ao Rosia. Hatraiza ny zavatra mifanipaka afaka eken'ny Rosiana kanefa mahalasa adala? Amin'ny fotoana rehetra, mino zavatra roa mifanipaka izy ireo. Ohatra, tsy misy ireo andianà tafika Rosiana any Okraina, nefa mandresy an'ady isika. Satria tsy mety resy isika. Satria tsy mety resy izany mihitsy ny Rosiana. Fa tsy misy andianà tafika any Okraina. Noho izany, na inona na inona alefa, hino foana izy ireo, satria mandeha ho azy izany. Na lainga aza io, hino azy ireo isika satria olontsika no milaza ireo lainga. Satria samy mandainga daholo ny rehetra, ka hifikitra amin'ny laingantsika isika.
Inona no zavatra andrasantsika amin'ny tsy fivadihan'ireo Rosiana amin'ireo “lainga” vokarina ao an-tranony? Mety hoe efa eo ka hijanona eo io. Nihanangatsiaka ny adin'ny Okraina Atsinanana, fa tafiditra ao anatin'ny fifandirana lavitra any Syria i Maosko ankehitriny, izay ilain’ny governemanta ny mifehy ny vaovao , (ary ny “fihetsika mandeha ho azy” eny amin'ny vahoaka mba hampandeha io) dia mafy noho ny hatrizay. Hetsiky ny lehilahy iray manohitra io fomban-javatra malaza io ny Noodleremover . Mety hahomby ve io? Milaza i Kovalev fa tsy manana fanantenàna be fahatany izy, ary manaiky ny fahefan'ireo olona izay mitarika ny fanjakan'ny media ao Kremlin. Na izany aza, fa tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny ny eto.